निगालो, एक तरकारी विनम्रता संस्कृति, प्याज र लसुन समान यसको गुण र गुणहरू रूपमा। संयंत्र को जवान मार धेरै शताब्दीपछि गत लागि खान्छन्। यो निगालो सूर्य बिताएको समय आधारमा, हरियो सेतो र बैजनी छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। अक्सर प्रयोग सेतो र हरियो बोट मार खाना पकाउने मा, पहिलो धेरै रेस्टुरेन्ट मेनु जहाँ अनुभवी शेफ निगालो कसरी मात्र खाना पकाउनु तर पनि स्ट्यु देखि, संस्कृति बाट व्यञ्जन विभिन्न प्रस्ताव थाहा पाउन सकिन्छ, र मिठाईहरू संग समाप्त हुन्छ।
यो खाना पकाउने को परम्परागत तरिका तरकारी संस्कृति पकाउने छ। यो उद्देश्य लागि, जवान यसलाई थप्दा पूर्व-नुन, चिनी र घिउ, छाला देखि purified stems एक बन्डल बाँध्न र उम्लिरहेको पानी जोडतोडले। यहाँ मुख्य कुरा अन्यथा त्यो मात्र यसको आकार गुमाउनु हुनेछ तर पनि स्वाद, उत्पादन डाइजेस्ट गर्न छैन। त्यसैले पाँच मिनेट हरियो निगालो फोडा गर्न सिफारिस गरिएको छ, र एउटा सेतो - आठ। उबला निगालो omelettes, माछा वा मासु व्यञ्जन, आलु संग सेवा गरे। यो यस्तो Hollandaise वा घिउ रूपमा सस को एक किसिम संग राम्रो जान्छ।
परम्परागत साथै त्यहाँ निगालो पकाउन धेरै अन्य तरिकाहरू छन्। यो तरकारी सबै उत्पादनहरु उपयुक्त छ, त्यसैले आधुनिक पकाउने निगालो को वाहेक संग व्यञ्जनहरु को एक किसिम प्रदान गर्दछ। खैर, यो उत्पादन यसलाई आडू र नाशपाती एक मिठाई रूपमा पेश गर्न सकिन्छ रूपमा, मटर र प्याज संग फरक सलाद मा देखिन्छ। मिति, धेरै पाक प्रतिष्ठानबाट मा अर्ध-उत्पादन समाप्त को रूप मा प्रस्तुत ड्राई निगालो प्रयोग। यो अक्सर लागि प्रयोग गरिन्छ निगालो खाना पकाउने कोरियाली। हामी कसरी पकाउन थप विस्तार जाँच्न भने कोरियाली निगालो, तपाईं यसलाई के उत्पादनहरु आवश्यक ध्यान गर्नुपर्छ। त्यसैले, यो उद्देश्य, सुक्खा निगालो, लसुन, गाजर, मसला, सिरका र तिल को बीउ लागि। ड्राई निगालो यसको सुनिंनु लागि पानी धेरै घण्टा सोख गर्न आवश्यक छ, त्यसपछि यसलाई टुक्रा मा कटौती छ, गाजर, एक grater मा grated, कटा लसुन, मसला, सिरका र तिल को बीउ थप्नुहोस्। यी सबै सामाग्री मिश्रित र रातो-तातो वनस्पति तेल खन्याइन् छन्। समाप्त पकवान सुन्दर हुन र केही घण्टा Infuse गर्नुपर्छ। अब हामी निगालो ड्राई कसरी खाना पकाउनु थाहा छ।
निगालो, एक आहार उत्पादन रूपमा, क्यालोरी कम, त्यसैले चाँडै मानव शरीर द्वारा अवशोषित छ। यसलाई समावेश biologically सक्रिय पदार्थ, भिटामिन, खनिज, आहार फाइबर, जो जठरांत्रिय पर्चा को गतिविधि उत्तेजित। हामी यसलाई आफ्नो गुणहरू गुमाउनु छैन त कसरी, निगालो खाना पकाउनु विचार भने, यो स्टीम गर्न सबै भन्दा राम्रो छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। यस मामला मा, यो सबै पोषक कायम रहन्छ। खाना पकाउने अघि को stems को fibrous भाग हटाउन आवश्यक छ। समाप्त उत्पादन, घिउ संग मिश्रित छ, पनीर वा सस संग छिडकना मासु थप्न, यो सबै व्यक्तिगत स्वाद प्राथमिकताहरू मा निर्भर गर्दछ।
यसरी, निगालो कसरी खाना पकाउनु, हरेक अनुभवी कुक थाह छ। यो उत्पादन देखि विभिन्न व्यञ्जन तयारी साथै, यो छुट्टै पकवान रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। धेरै nutritionists आहार विकास वा दिन व्रत यो तरकारी बाली प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं। एक मूल्यवान खाद्य उत्पादन रूपमा, निगालो पोषक मा धनी छ, यो पचाउन सजिलो छ र पाचन पर्चा सुधार गरेर पाचन प्रक्रिया पत्र मद्दत गर्छ। यसलाई देखि व्यञ्जन जिगर र अन्तस्करणले सकारात्मक प्रभाव, साथै हृदय र रक्त नली छ। यसबाहेक, निगालो शरीर देखि toxins हटाउन, मद्दत गर्छ प्रोस्टेट को प्रदर्शन सुधार। यो मान्छे मधुमेह, मृगौला पत्थर रोग र अन्य धेरै रोगहरु भोगिरहेका लागि प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ।
साना रहस्य: आलु कसरी खाना पकाउनु
छुट्टी तालिका मा स्वादिष्ट स्यान्डविच
सुझाव र समीक्षा खाना पकाउने, उत्कृष्ट व्यञ्जनहरु: कसरी घर मा हलुआ खाना पकाउनु
पोर्क को skewers कसरी खाना पकाउनु
स्वर्ग प्राप्त कसरी? कति मानिसहरू स्वर्ग जाने?
रूपमा "Maynkraft" रत्तीएको भेडा, र किन?
सुरुवात आफ्नो साइट निर्माण
स्कूलको दिनको सही मोड, यसको औचित्य र सख्त अवलोकन
Multivarka मा गोभी पाइ - उपयोगी र क्यालोरी धेरै धनी छैन
को "मिशेलिन स्टार" के हो?
कसरी मार्ग-अधिकार बिना कम्प्युटर मार्फत "एन्ड्रोइड" मा प्रणाली अनुप्रयोगहरू हटाउन?
होटल Boguchar: समीक्षा, आगंतुकों को समीक्षा
घाँस सर्प - यो एक Viper छ!
धरती मा सबै भन्दा ठूलो समुद्र